अझै कति मान्छे मार्ने ? ओम अस्पतालका एमडिलाई हाम्रो प्रश्न नै प्रश्न! – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, ८ आश्विन बुधबार ०९:२३
अझै कति मान्छे मार्ने ? ओम अस्पतालका एमडिलाई हाम्रो प्रश्न नै प्रश्न!
एजेन्सी, काठमाडौं। न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ४३४ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडलाई न्युज २४ टेलिभिजनको स्टुडियोबाट नभई चितवनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको छ । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
PREVIOUS Previous post: एपेन्डिक्स भनेर शैयामा राखिएकी बिरामीको पाठेघरको शल्यक्रिया !
NEXT Next post: आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न सिमकार्डमा पनि केवाईसी